Myanmar Climate Change Alliance
ဖန်လုံအိမ် အာနိသင် အကျိုးသက်ရောက်မှု
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် နှင့် အခြား ဓာတ်ငွေ့များ
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဧ အကျိုးသက်ရောက်မှု နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဧ အခြေအနေ
အနာဂတ်ကာလ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များ
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထိခိုက်လွယ်မှု အများဆုံး ရှိနိုင်သည့် နိုင်ငံများအနက်မှ တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ မကြာခဏေမးမြန်းသည့်မေးခွန်းများ
Climate Change Awareness Strategy
ကဏ္ဍ (၆) ခု၏ လုပ်ငန်းစဉ်များဆိုင်ရာ မူဝါဒ အကျဉ်းချုပ်အား ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဇန်နဝါရီ 12, 2018
မကြာမီတွင် ထုတ်ပြန်ပေးတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၁၆-၂၀၃၀) တွင် ပါဝင်သည့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍ (၆) ခု၏ မူဝါဒ အကျဉ်းချုပ်များအား MCCA website တွင် အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ရရှိဖတ်ရှိုနိုင်ပါသည်။ ဤ link တွင် ဝင်ရောက်၍ download ရယူနိုင်ပါသည်။ ထိုမဟာဗျူဟာသည် (၁) စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး၊(၂) ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းသည့် ဂေဟစနစ်ဖြစ်စေရေး၊ (၃) စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်၍ ခံနိုင်ရည်ရှိသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စနစ်များ၊ (၄) ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော မြို့ကြီးများ၊ (၅) ပြည်သူလူထုကျန်းမာရေးနှင့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း နှင့် (၆) ပညာရေးသိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ စသည့် ကဏ္ဍ (၆) ခုအား လွှမ်းခြုံနိုင်ပါသည်။ MCCA library ... Read more...
သင်တို့၏ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း အသိပညာဗဟုသုတအား စစ်ဆေးကြည့်စေလိုပါသည်။
MCCA သည် မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း အသိပညာဗဟုသုတ ဆိုင်ရာ လေ့လာ ဆန်းစစ်ချက်အား facebook မှ တဆင့် မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဤလေ့လာဆန်းစစ်ချက်တွင် ပါဝင်နိုင်ရန် ဤ link ကို ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ အဖြေများအား မကြာမီအချိန်တွင် facebook နှင့် MCCA website တွင် ဖော်ပြပေးပါမည်။ မကြာမီ ရက်သတ္တပတ်တွင် ရလာဒ်အဖြေများကို လေ့လာဆန်းစစ်၍ ပြည်သူလူထုသို့ ထုတ်ပြန် ပေးပါမည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍတွင် ခံနိုင်ရည်ရှိစေရေး
ဇန်နဝါရီ 11, 2018
ယခုအခါ MCCA ၏ online library တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍတွင် ခံနိုင်ရည်ရှိစေနိုင်ရေး အတွက် မူဝါဒကောက်နုတ်ချက်အား ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည် သော ဖွင့်ဖြိုးတိုးတတ်မှုများအတွက် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍသည် မည်သည့်အတွက် ကြောင့် အရေးကြီးသော မဟာဗျူဟာတစ်ခုအနေဖြင့် ပါဝင်နေရပါသလဲ? စက်ရုံများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ခံနိုင်ရည်ရှိစေရေးဆောင်ရွက်ရန် မည်သည့်အရာများ လိုအပ်သနည်း? မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ပုကလိဂ္ဂကဏ္ဍသည် မည်သည့် အခန်းမှ ပါဝင်သနည်း? စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ အထည်အလိပ်ကဏ္ဍ၊ ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍများတွင် အဓိက အသေးစိတ် ရေးသားထားသော မူဝါဒအသစ်များကို ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
မှတ်တမ်းဗီဒီယိုအသစ်အား ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုပူနွေးလာသော နေ့ရက်များ။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာတဲ့မြန်မာ
ဒီဇင်ဘာ 8, 2017
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်နေပါသလဲ? ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းများ နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် နည်းလမ်းများက ဘာတွေလဲ? ဒါတွေကိုသိဖို့အတွက် “ပူနွေးလာသော နေ့ရက်များ- “ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာတဲ့ မြန်မာ”ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ပြီး အဖြေရှာကြည့်ပါလား။ ဤမှတ်တမ်းဗီဒီယိုကို European Union ၏ ထောက်ပံ့မှုဖြင့် Yangon Film School မှ သဘာဝသံယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ (MCCA) တို့အတွက် ရိုက်ကူး ထုတ်လုပ်ပါသည်။ သင်သဘောကျနှစ်သက်ပါက လွတ်လပ်စွာ မျှဝေနိုင်ပါသည်။ ပြီးတော့ သင့်၏ ထင်မြင် ယူဆချက်များအား ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောကြားပေးစေလိုပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၏ မကောင်းသောသက်ရောက်မှုများကို ကမ္ဘာပေါ်တွင် အများဆုံး ကြုံတွေ့ရနိုင်မည့် နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လူပေါင်း ၁၃၀,၀၀၀ ထက်ပိုမို၍ သေဆုံးစေခဲ့သော ... Read more...
ချင်းပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ်များတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများအား ဆန်းစစ်ခြင်း
စက်တင်ဘာ 18, 2017
MCCA၊ ECD နှင့် International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) တို့သည် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ခံစားရလွယ်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက် ရန် ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ(ဖလမ်း၊ ဟားခါး၊ နှင့် ထန်းတလန်) မြို့ (၃) မြို့သို့ လေ့လာရေးခရီးသွားရောက်ခဲ့ကြပြီး ထိုလေ့လာ တွေ့ရှိချက်များမှတဆင့် မြို့နယ်တစ်မြိုအား ရွေးချယ်၍ ဆန်းစစ်ခြင်းအား ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ မြို့နယ်တစ်မြို့ ရွေးချယ်ခြင်းအစီအစဉ်အား ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်၍ မြို့နယ် ရွေးချယ်မှု ပြီးလျှင်ပြီးခြင်း လေ့လာဆန်းစစ်မှုများအား ချက်ချင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မိုးပြင်းထန်စွာ ရွာသွန်းနေမှုများ၊ ပုံသဏ္ဍန်မမှန်သော မိုးရွာသွန်းမှု ပြသနာများ၊ အပူချိန် မြင့်မားနေမှုများ၊ ပြင်းထန်သောလေတိုက်ခတ်မှုများ ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် မြေပြိုကျမှုများ ... Read more...
လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း ကြောင့် ထိခိုက်လွယ်မှု အများဆုံး နိုင်ငံများအနက် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် (၆) စု တွင် အပူချိန်မြင့် တက်လာခြင်း၊ မိုးရွာသွန်းမှုများပြားလာခြင်းနှင့် ဆိုင်က လုန်းမုန်တိုင်းများတိုက်ခတ်ခြင်း၊ ရေကြီးရေလျှံမှုများ၊နှင့် မိုးခေါင်မှုများ ကဲ့သို့သော မိုးလေ ဝသဖြစ်စဉ်များဧ်။
ပြင်းထန်မှု သာမက အကြိမ်အရေအတွက်လည်း များပြားလာကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ ဤအပိုင်းတွင် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု အကြောင်းဖြစ်သော အချို့ အခြေခံကျသည့် အချက်အလက်များကို ယေဘုယျ အားဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။
ယင်းအား နောက်ပိုင်းတွင် အကြောင်းအရာတိုးချဲ့ခြင်း နှင့် အထောက်အကူပြု အချက်များ ဖြည့်စွက်ခြင်းများအား ပုံမှန်အားဖြင့် ဆက်လက် ဖော်ပြမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းအား ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရာတွင် အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးဧ်။ ကဏ္ဍပေါင်းစုံ ပါဝင်သော မဟာဗျူဟာ ကျကျ ချဉ်းကပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အမျိုးသားအဆင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ နှင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွက် လက်ခံချမှတ်ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယင်း မဟာဗျူဟာနှင့် ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲထားသည်ကို လေ့လာဖတ်ရှုပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၁) ရက် အမီ သင်တို့ဧ်။ ဝေဖန် အကြံပြုချက်များအား ပေးပို့ပေးစေလိုပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးပါသည့် အကြောင်းအရာ များအား အများပြည်သူအား ပိုမိုသိရှိလာစေရေးသည် ကျနုပ်တို့ဧ်။
ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များပင်ဖြစ်ပါသည်။ သင် စာတမ်းတစ်စောင်ရေးသားရာတွင် လည်းကောင်း၊ မဟာသိပ္ပံကျမ်းပြုစုရာတွင် လည်းကောင်း၊ စီမံကိန်းတစ်ခု ရေးဆွဲရာတွင် လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ရေးရည်ရွယ်ကာ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများ စုစည်း ဖော်ပြထား ပါသည်။
ဤဝေါဟာရ အဘိဓာန်အား ပုံမှန် မွမ်းမံဆန်းသစ် ပေးမည် ဖြစ်သဖြင့် ဤ အဘိဓာန် စာမျက်နှာတွင် ဝေါဟာရများ နှင့် ယင်းဧ်။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအား ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
Community-Based First Aid / ရပ်ရွာလူထု ခြေပြုရှေးဦးပြုစုခြင်း -
Vulnerability Reduction / ထိခိုက်ခံရလွယ်မှုလျှော့ချရေး -
Vulnerability Map / ထိခိုက်ခံရလွယ်မှုပြမြေပုံ -
Vulnerability Assessment / ထိခိုက်ခံရလွယ်မှုဆန်းစစ်ခြင်း -
Vulnerability and Capacity Assessment (VCA) / ထိခိုက်ခံရလွယ်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ချက် -
MCCA Updates_MYA-March 17low
Climate Change and Private Sector Resilience
Policy Brief6– BuildingaResilient Myanmar Society through Education, Science and Technology
Copyright © 2018 · Myanmar Climate Change Alliance